Mamorona fifanakalozana horonan-tsary amin'ny Premiere mora foana. Famoronana an-tserasera
Mamorona fiovana horonan-tsary amin'ny Premiere mora ny kilalaon-jaza noho ny toerana lehibe nomen'ny interface Premiere aiza miaraka amin'ny iray monja Click izahay dia efa nahavita nametraka tetezamita matihanina tamin'ny famaranana tena madio. misy ny karazana tetezamita samihafaNy tsirairay amin'izy ireo dia ampiasaina amin'ny tanjona hafa miankina amin'ny filan'ny tetikasa tsirairay. Hianarantsika ny hahita avy aiza ny tetezamita Premiere ary hampihatra ny iray aminay isika vokany manjavona amin'ny lahatsarinay hahazoana vokatra amin'ny fomba sinema tena izy.
Eo amin'ny tontolon'ny sinema sy audiovisual manjaka ny fahombiazan'ny tetezamita: mandiso tetezamita, ny ataon'ity tetezamita ity dia ny fampiraisana ny any aoriana amin'ny alàlan'ny karazana gradient, ka amin'izany dia mahatratra ohatra ny lohatenin'ny sarimihetsika dia nanjavona tsikelikely rehefa manomboka.
En Premiere ny fampiharana transitions dia tena mora, tsotra fotsiny ny zavatra tsy maintsy ataontsika dia hisintona tetezamita amin'ny horonan-tsary ary ampifanaraho avy eo ny safidinao. Amin'ity tranga ity dia hanao izany isika mamorona tetezamita manjavona, amin'ny Premiere dia antsoina hoe: mandehana fotsy na mandeha mainty. Samy mahavita mitovy ny tetezamita roa, ampidino ny opacity ary avelao ho hita ny lafika.
Ny zavatra voalohany hataontsika dia mamorona ambadika, afaka loko na video nampidirina ho background. Ho afaka hampihatra ny vokany amin'ny typografia sy horonan-tsary isika, raha tiantsika ny hanombohana ny tetikasanay audiovisual amin'ny horonantsary iray izay manjavona tsikelikely ary avelao isika hahita horonantsary hafa ao ambadik'izany, afaka mampihatra izany ihany koa isika. HO AN'NY mamorona ny aoriana mila mankany amin'ny vakizoro fotsiny isika loko vaovao / matte.
Rehefa avy vonona ny vola dia ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia mamorona lohateny an-tsoratra ampiharina avy eo ny vokany manjavona. HO AN'NY mamorona lahatsoratra tsy maintsy mandeha any amin'ny kiheba isika lohateny default / lohateny vaovao / sary mbola. Ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia ny misintona ny lahatsoratray mankany amin'ny fandaharam-potoana mba hampiharana azy io.
Premiere manana katalaogin'ny fifanakalozana horonantsary, raha te hiditra ity katalaogna ity dia tsy maintsy ataontsika tadiavo ny kiheba video effects / transitions. Amin'ity tranga ity dia hampiasa ny tetezamita manomboka amin'ny mandeha mainty. ny mampihatra tetezamita Mila tarihinao fotsiny avy eo amin'ny menio tetezamita mankany amin'ilay horonan-tsary tianay hampiharana azy, raha vao apetraka dia afaka manindry indroa azy eo amin'ny fizotry ny fotoana sy miditra amin'ny menio mba hanovana ny toerana misy anao.
Para mahazo vokatra tetezamita tsara ny sisa ataontsika dia kajy tsara ny fotoana faharetana tetezamita hahatonga azy io ho malama araka izay azo atao. Raha ny mampihatra azy amin'ny lahatsoratra no tadiavintsika dia ara-dalàna raha vakiana tsara indroa farafaharatsiny indroa farafahakeliny alohan'ny fanjavonan'ny tetezamita. Ny fikafika dia ny mampihatra sy manamarina tsy an-kijanona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Mamorona fifanakalozana horonan-tsary amin'ny Premiere mora foana
Ireo mpamorona logo amin'ny Internet tsara indrindra
Ireo pejy 29 tsara indrindra ahazoana ireo volo maimaimpoana